Ururro ka socda Maraykanka oo tagay Garowe - BBC Somali
Ururro ka socda Maraykanka oo tagay Garowe
19 Juunyo 2010
Image caption Meelaha ay ku sugan yihiin dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah magaalooyinka Puntland.
Wafdi ka socda dalka Maraykanka, oo isugu jira laba urur oo ka shaqeeya arrimaha dadka barakacayaasha ah, ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga magaalada Garoowe, waxayna xubnaha wafdiga iyo maamulka Puntland gacanta ku hayaan qiimayn la xiriirta baahiyaha barakacayaasha iyo qaxootiyada ku sugan Puntland.
Weriyaha BBCda Axmed Maxamed Cali, ayaa socdaalka wafdigaas iyo waxa ay qaban doonaan ka waraystay Wasiiru-dowlaha maamul wanaaga Puntland Max'ed Faarax Ciise Gaashaan wuxuuna marka hore waydiyay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeeddada wafdigu u socdo.
Wafdigan inta uu joogo, wuxuu booqasho ku tegi doonaa xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee ku yaalla magaalooyinka Boossaso iyo Gaalkacy,o wuxuuna qiimayn ku samayn doonaa baahiyaha kala duwan ee xagga nolosha iyo horumarinta ee haysta xeryaha barakacayaasha.
Wasiirka maamul-wanaagga Puntland Max'ed Faarax Ciise Gaashan, oo BBCda u warramay, ayaa sheegay in wafdiga oo ka socda laba urur oo samafal kana shaqeeya arrimaha barakacayaasha laga filayo mustaqbalka dhow inay gacan wayn ka gaystaan daboolida baahiyaha barakacayaasha iyo xitaa kaalmo loo fidiyo dadka kale ee danyarta ah ee gobolka ku sugan.
Inta uu joogo wafdigu gudaha Puntland, wuxuu kaloo booqan doonaa xarumaha lagu xanaaneeyo agoonta iyo dadka naafada ah iyadoo sidoo kale qiimayn lagu samayn doono sidii waxtar ku aaddan dhinaca waxbarashada iyo qalabka waxbarashada loogu heli lahaa dadka dhegaha iyo indhaha la' ee ku sugan goobaha waxbrashada qaarkood.
Maamulku Puntland, wuxuu sheegayaa in si arrimahaas oo dhami ay u noqdaan kuwo hirgelintoodu ay suuragasho in ay filayaan in hay'adaha Maraykanku ay xarumo ka furtaan magaalada Garoowe si ay ugu fududaato fullinta hawlaha ay doonayaan in ay qabtaan.